घरमा रंग लगाउँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्, नत्र बिग्रन सक्छ ग्रह
घरको अलग अलग स्थानमा अलग अलग ग्रहले बास बस्ने धर्म शास्त्रले बताउँछ ।
त्यसकारण ग्रहको लागि सही रंग प्रयोग गरेमा ग्रह शक्तिशाली हुन्छ । सही स्थानमा सही रंगको प्रयोग गरेमा मात्रै ग्रहको सन्तुलन हुन्छ र घरमा सुख शान्ति रहन्छ ।
तपाईंले तपाईंको घरको कस्तो ठाउँमा कस्तो रंग प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सावधान ! गतल स्थानमा गलत रंग प्रयोग गरेमा ग्रह बिग्रने खतरा समेत हुन्छ । त्यसकारण घरमा रंग लगाउनुपूर्व यी कुराहरूबारे जानीराखौं :
घरमो मूल ढोकाको रंग कस्तो हुनुपर्छ ?
घरको बस्ने कोठाको रंग कस्तो हुनुपर्छ ?
बाथरूमको रंग कस्तो हुनुपर्छ ?